विद्यालय शिक्षा उद्देश्य जो ज्ञान विद्यार्थीहरूको Assimilation विस्तार गर्ने छ शिक्षण विधिहरू, विभिन्न समावेश छ। तर, शिक्षक र trainers अझै पनि कसरी प्रभावकारी साना पुस्ता सिकाउन को मुद्दाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। यसलाई त्यसैले सकारात्मक प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू गर्न विभिन्न नवाचारै को परिचय द्वारा कथित छ।
Extractive सिक्ने मोड
स्कूल सधैं मा विद्यार्थी र शिक्षक बीच संचार निष्क्रिय र सक्रिय विभाजित भएको थियो। र हालै मात्र अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधि देखा परे।
रूपमा यी प्रविधी प्रत्येक प्रतिनिधित्व?
जब मात्र शिक्षक शब्दहरू, साथै पाठ्यपुस्तकहरु को सामाग्री देखि सामाग्री mastering निष्क्रिय मोडेल छात्र हुन्छ। को protagonist यस पाठ मा एक शिक्षक छ। विद्यार्थी पनि केवल निष्क्रिय श्रोताहरू छन्। यो विधि मा शिक्षक संग संचार विद्यार्थी नियन्त्रण वा हालतमा बाहिर छ स्वतन्त्र काम, परीक्षण र सर्वेक्षण। शिक्षा यो मोडेल परम्परागत छ, र शिक्षकहरू द्वारा प्रयोग जारी छ। यस्तो प्रशिक्षण पाठ को एक उदाहरण लेक्चर को रूप मा सञ्चालन छन्। यस मामला मा, विद्यार्थी कुनै पनि रचनात्मक कार्य प्रदर्शन छैन।
विद्यालय शिक्षा विकास वर्तमान चरण मा निष्क्रिय मोड अप्रासंगिक बन्नेछ। सुरू थप मोटे सक्रिय विधिहरू प्रयोग गर्न। तिनीहरूले प्रशिक्षण प्रक्रिया दुवै पक्षलाई प्रत्येक अन्य कुराकानी जसमा विद्यार्थी, संग शिक्षक अन्तरक्रिया एक रूप हो। यस मामला मा विद्यार्थीहरूको निष्क्रिय छैन श्रोताहरू गर्छ। तिनीहरूले शिक्षक संग बराबर अधिकार भएको पाठ सक्रिय सहभागी हुन्छन्। यो बच्चाहरु र आफ्नो स्वतन्त्रता को संज्ञानात्मक गतिविधि बढावा। ज्ञान, रचनात्मक कार्यहरू को भूमिका प्राप्त को प्रक्रिया मा। साथै, निष्क्रिय विधि authoritarian शैली प्रभुत्व भने, उहाँले सक्रिय लोकतान्त्रिक बाटो जान्छ।
तर, यो मोडेल मा, त्यहाँ केही कमियां छन्। schoolchildren यसको प्रयोग मात्र आफूलाई लागि विषयहरू सिकाइरहेका छन्। बच्चाहरु शिक्षक संग कुराकानी, तर प्रत्येक अन्य संग एक संवाद सञ्चालन छैन। तसर्थ, सक्रिय सिक्ने विधि एक-पक्षीय छ। सेल्फ-सिक्दै प्रविधि, आत्म-विकास, आत्म-शिक्षा र स्वरोजगार आचरण प्रयोग गर्दा यो सान्दर्भिक छ। यस मामला मा, सक्रिय मोड ज्ञान साझेदारी छोराछोरीलाई सिकाउन छैन। यो समूहमा अनुभव र अन्तरक्रिया बढाउनका अनुमति छैन।
उन्नत अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधि पनि छन्। यो प्रविधी संग सम्पूर्ण पाठ कसैसँग संवाद वा कुराकानी को मोड मा स्थान लिन्छ। सिक्ने सक्रिय र अन्तरक्रियात्मक प्रविधिहरू सामान्य धेरै छन्। केही पनि तिनीहरूलाई बीच एक बराबर चिन्ह राखे।
तर, विधि मा शिक्षक संग, तर पनि आफूलाई बीचमा मात्र होइन अन्तरक्रियात्मक व्यापक pupils अन्तरक्रिया केंद्रित। यो पाठ मा शिक्षक को स्थान के हो? उहाँले कक्षा अगाडि कार्यहरू पूरा गर्न विद्यार्थीहरूको गतिविधिहरु निर्देशन। यसरी, पारस्परिक सिक्ने प्रविधि - छैन सक्रिय विधि को आधुनिक फारम तर केही छ।
धेरै शब्द "अन्तरक्रियात्मक" अंग्रेजी देखि मा रूसी आए। यसको शाब्दिक अनुवाद अर्थ "साधारण" (Inter) र "कार्य" (कार्य)। "अन्तरक्रियात्मक" शब्द, संवाद, कुराकानी गर्न सक्षम वा जो कोहीले (जस्तै, मानिसहरूलाई) संग, केहि (कम्प्युटर) संग साथै अन्तरक्रिया गर्ने क्षमता व्यक्त। यसरी, प्रशिक्षण को एक नवीन रूप एक संवाद जसमा अन्तरक्रिया छ।
अन्तरक्रियात्मक मोड को संगठन
ज्ञान को प्रस्तुति को नवीन फारम विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा सहज अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यहाँ जीवन विभिन्न परिस्थितिहरु, र प्रयोग भूमिका-निभाउने खेलहरू एक सिमुलेशन हुँदा विद्यालयमा अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधिहरू, एक पाठ संगठन सुझाव। यस मामला मा, प्रश्न को सामान्य समाधान प्रस्तावित अवस्थामा र परिस्थिति विश्लेषण आधारित बनेको छ खडा।
सूचना विद्यार्थीहरूको चेतना भित्र पस्नु र मस्तिष्क गतिविधि उत्तेजित बग्छ। निस्सन्देह, यो अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधि पूर्ण अवस्थित परिवर्तन आवश्यक पाठ संरचना। साथै, यस्तो शासन असम्भव शिक्षक को विशेषज्ञता र व्यावसायिकता बिना छ।
आधुनिक पाठ को संरचना मा विशिष्ट प्रविधी छ जो अधिकतम अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधिहरू को, प्रविधि लागू गर्नुपर्छ। ज्ञान हासिल गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर थप रोचक र धनी हुनेछ।
त्यसैले पूर्वप्राथमिक मा अन्तरक्रियात्मक शिक्षण प्रविधि के हो? यी विद्यार्थीलाई निरन्तर, को उद्देश्य र आत्मपुरक सम्बन्ध प्रशिक्षण प्रणालीमा प्रतिक्रिया छ समय समयमा सक्रिय तत्व रूपमा यसको संरचना मा प्रवेश गर्दा कि प्रविधी हो।
सिक्ने को नवीन प्रकारका मान
को आरएफ कानून को शैक्षिक प्रक्रिया को लागि humanization सिद्धान्त पवित्र बुझएर सुरक्षित राखन गर्न। यो सम्पूर्ण सामग्री को संशोधन आवश्यक हुनेछ सिक्ने प्रक्रिया।
स्कूल मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्र मानसिक र संज्ञानात्मक गतिविधि को व्यायाम मा बालबालिकाको व्यक्तित्व को समग्र विकास को एक प्रक्रिया हो। र यो पूर्णतया आधुनिक अन्तरक्रियात्मक प्रविधिहरू योगदान। तिनीहरूले स्वतन्त्र प्रयोग गर्दा छात्र ज्ञान बाटोमा छ र तिनीहरूलाई बढी सिक्छन्।
शिक्षण विधिहरू अन्तरक्रियात्मक डिजाइन को प्रविधि:
- विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रियाहरू बलियो बनाउन;
- यो जगाउन भित्री संवाद स्कूल को विद्यार्थी;
- विनिमय विषयको थियो जो जानकारी, समझ प्रदान गर्न;
- लागू individualization शैक्षणिक अन्तरक्रिया;
- यो अध्ययन विषय हुनेछ जहाँ एक स्थिति मा एक बच्चा ल्याउन;
- विद्यार्थी बीच जानकारी विनिमय को प्रक्रिया मा दुई-तरिका संचार प्रदान गर्न।
शैक्षिक अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधिहरू सुविधा र ज्ञान प्राप्त को प्रक्रिया समर्थन गर्न शिक्षक को कार्य सेट छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ:
- दृश्य को अंक को विविधता प्रकट गर्न;
- यो संवाद सहभागी व्यक्तिगत अनुभव उल्लेख;
- गतिविधि pupils कायम;
- सिद्धान्त संग अभ्यास संयोजन;
- सहभागीको को अनुभव को आपसी संवर्धन गर्न योगदान;
- समस्या को धारणा र Assimilation सुविधा;
- छोराछोरीको रचनात्मकता प्रोत्साहन।
अन्तरक्रियात्मक सिक्ने को प्रविधिहरू मिति भन्दा उन्नत छन्। समस्याग्रस्त परिस्थिति सिर्जना को स्वागत प्रयोग गर्दा आफ्नो सार जानकारी प्रसारण गर्न कम छ एक निष्क्रिय र सक्रिय मोडमा छैन। पाठ को उद्देश्य schoolchildren वा स्वतन्त्र सामना लागि आफ्नो निर्देशन गर्न ज्ञान हस्तान्तरण गर्न तयार छैन। अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधी शैक्षणिक व्यवस्थापन पाठ संग बच्चा आफ्नै पहल उचित संयोजन अन्य अवस्थित विधिहरू भिन्न हुन्छ। यो सबै सिकाउने मुख्य लक्ष्य को उपलब्धि योगदान - व्यक्तित्व को एक व्यापक र सुरिलो विकास निर्माण।
विधि को सकारात्मक पक्षहरू
अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधिहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ:
- जानकारी विनिमय व्यवस्थापन, शैक्षिक र प्रशिक्षण कार्यहरूको दक्षता सुधार;
- विद्यार्थी व्यवहार मा आफ्नो ज्ञान लागू गर्न, आत्मसंयम।
साथै, अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधि बच्चा को प्रारम्भिक मानसिक विकास बढवा दिन्छ। विद्यार्थी र शिक्षक बीच जानकारी विनिमय बाहेक आफ्नो निष्कर्ष को विशुद्धता मा बच्चा विश्वास उठ्छ।
संगठन को विशेषताहरु
अन्तरक्रियात्मक सिक्ने प्रविधिहरू प्रयोग शैक्षिक वातावरण संग विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया मार्फत हुन्छ। यो बच्चाहरु शैक्षिक ज्ञान को एक केन्द्रिय प्रवर्तक छ जो अनुभव, प्राप्त जसमा एक वास्तविकता रूपमा सेवा गर्दैछन्।
पारंपरिक निष्क्रिय वा सक्रिय सिक्ने शिक्षक एक फिल्टरको भूमिका तोकिएको। उहाँले पूर्ण प्रशिक्षण जानकारी पास गर्न बाध्य छ। अनलाइन सिक्ने यी परम्परागत विधिहरू गर्न विपरीत जानकारी प्रवाह सक्रिय, एक विद्यार्थी सहायक रूपमा शिक्षकको भूमिका प्रदान गर्दछ।
अन्तरक्रियात्मक सिक्ने मोडेल, परम्परागत संग तुलना, शिक्षक संग विद्यार्थीको अन्तरक्रिया परिवर्तन। शिक्षक आफ्नो पहल को प्रकटीकरण लागि अवस्था सिर्जना गर्ने, आफ्नो गतिविधि बच्चाहरु दिन्छ। विद्यार्थी यी पाठ पूर्ण सहभागीहरू छन्। तर, आफ्नो अनुभव गरेझैं तयार ज्ञान दिनुहुन्छ नगर्ने शिक्षक, को अनुभव महत्त्वपूर्ण छ, र खोज्न आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
शिक्षक को भूमिका
अन्तरक्रियात्मक सिक्ने को प्रविधि विकास कक्षाकोठामा शिक्षक धेरै कार्यहरू कार्य मान्छ कि। तिनीहरूलाई एक - एक विशेषज्ञ informant रूपमा कार्य गर्न। यो गर्न, सिक्ने प्रक्रियाको परिणाम ट्र्याक र यति मा तयार र भिडियो देखाउन पाठ सामाग्री प्रस्तुत, पाठ को सहभागी प्रश्नहरूको जवाफ। डी
पनि अन्तरक्रियात्मक सिक्ने शिक्षक संग facilitator, आयोजक को भूमिका खेल्छ। यो शारीरिक र सामाजिक वातावरण विद्यार्थीहरू संग अन्तरक्रिया स्थापना मा हुन्छन्। यो गर्न, शिक्षक छोराछोरी समूह मा, तिनीहरूलाई दिइएको कार्यहरू समन्वय छ, विभाजन जवाफ आत्म-खोज गर्न जान्छ, र यति मा। डी
अन्तरक्रियात्मक सिक्ने मा शिक्षकको भूमिका सलाहकार कार्य को कार्यान्वयन implies। शिक्षक मात्र छैन विद्यार्थीहरूको पहिले नै संचित अनुभव बुझाउँछ, तर पनि समस्या समाधान फेला तिनीहरूलाई मद्दत गर्छ।
अन्तरक्रियात्मक प्रविधिहरू को प्रकारका
शिक्षक द्वारा कक्षाकोठामा ज्ञान को प्रभावकारी वितरण लागि नवीन विधि प्रयोग गर्दछ:
- जोडी, तीन, आदि मा विद्यार्थीहरूलाई तोडने सानो समूह, काम।।
- एक काराउजेल विधि;
- अनुमानी कुराकानी;
- प्रस्तुति जो को समस्या छ लेक्चर,;
- विमर्श प्रविधी;
- व्यापार खेल;
- बहस वा छलफल को रूप मा सेमिनार;
- मल्टिमिडिया उपकरण;
; प्रविधिको पूर्ण सहयोग -
- परियोजनाहरूको विधि, आदि ...
हामीलाई तिनीहरूलाई केही विचार गरौं।
यो विषयमा एक keen चासो Awakening अन्तरक्रियात्मक सिक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मध्ये एक छ। बच्चाहरु खेल्न प्रेम। र शैक्षिक र प्रशिक्षण उद्देश्य समाधान गर्न प्रयोग हुने तिनीहरूले आवश्यक यो।
स्कूल बच्चाहरु को लागि व्यापार खेल राम्ररी तयार र विचारशील शिक्षक हुनुपर्छ। अन्यथा, तिनीहरूले लागि बच्चाहरु उपलब्ध र अरोचक हुने छैन।
कक्षाकोठामा व्यापार खेल योगदान:
- समस्याको बाहिर प्ले र कक्षाकोठामा नक्कली छन् साथै, सिक्ने चासो बढेको;
- कुनै पनि दिइएको अवस्थाको एक पर्याप्त विश्लेषण को संभावना;
- जानकारी को ठूलो मात्रा अवशोषण;
-, विश्लेषणात्मक नवीन, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सोच को विकास।
व्यापार खेल अनुसार वर्गीकृत छन्:
- गेमिङ वातावरण (डेस्कटप, कम्प्युटर, टेलिभिजन, प्राविधिक);
- गतिविधि (सामाजिक, बौद्धिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, रोजगारी) को क्षेत्र;
- पद्धति (भूमिका, विषय, वस्तु, सिमुलेशन);
- वर्ण शैक्षणिक प्रक्रियाको (संज्ञानात्मक, शैक्षिक, निदान generalizing, शैक्षिक, प्रशिक्षण)।
अन्तरक्रियात्मक विदेशी भाषा सिक्ने प्रविधि अक्सर भूमिका-निभाउने खेलहरू प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले नाटक वा मनोरञ्जन गतिविधिहरु को प्रकारको लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, यस खेल को सहभागीहरू एक तोकिएको छ वा त्यो बच्चाहरु या त प्ले अग्रिम अर्को भूमिका कथा सिर्जना गर्न, वा आन्तरिक वातावरण तर्क द्वारा निर्देशित। यो तपाईं अनुमति दिन्छ:
- विकास एक मानसिकता अर्थ एक विदेशी भाषा अध्ययन गर्न;
- विषय को प्रेरणा वृद्धि;
- विद्यार्थी व्यक्तिगत वृद्धि प्रदान गर्न;
- तिनीबारे राम्रो र सक्रिय प्रत्येक अन्य कुराकानी गर्ने क्षमता सुधार गर्न।
जोडी वा समूहहरू काम
यो विधि एक अन्तरक्रियात्मक आधारमा पाठ समयमा लोकप्रिय पनि छ। जोडी वा समूहहरू काम सबै विद्यार्थीहरू (पनि सबैभन्दा बन्देज) अभ्यास पारस्परिक सम्बन्ध र सहयोग कौशल अनुमति दिन्छ। विशेष, यो सबै असहमति समाधान गर्न सुन्न क्षमता र सजिलो प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
समूह वा जोडे विद्यार्थीहरू आफूलाई फारम गर्न सक्छन्, तर प्राय यसलाई शिक्षक बनाउँछ। यस मामला मा, शिक्षक विद्यार्थी स्तर र आफ्नो सम्बन्ध प्रकृति, साथै तिनीहरूलाई कार्ड वा बोर्ड मा उनलाई लेखेर समस्या रूपमा स्पष्ट सकेसम्म प्रस्तुत खातामा लाग्छ। पनि यो समूह कार्य गर्न समय पर्याप्त रकम दिन्छ।
यो अन्तरक्रियात्मक प्रविधि मनोवैज्ञानिक तालीम बाट ऋण लिएका थिए। काम बच्चाहरु को यस प्रकारको सामान्यतया धेरै रुचाउनु छन्। बाह्य र आन्तरिक: यो प्रविधी लागू गर्न pupils दुई छल्ले गठन। तिनीहरूलाई को पहिलो - हरेक 30 सेकेन्ड, बिस्तारै एक सर्कल मा सार्ने कि विद्यार्थी हो। भित्री घन्टी अझै पनि तिनीहरूको अगाडि हुन भयो गर्नेहरूलाई एउटा संवाद प्रमुख, छोराछोरी माथि बसेर छ। विद्यार्थीहरू एक उहाँले सही थियो कि आफ्नो interlocutor विश्वस्त गर्न प्रयास गर्दा तीस सेकेन्ड भित्र, त्यहाँ एउटा मुद्दा छलफलको छ। एक विदेशी भाषा को अध्ययन मा "खेलाची" को विधि, "परिचय", "सडक मा कुराकानी", र यति मा। डी को मान्छे ठूलो उत्साह संग कुरा, र सबै पाठ छैन छिटो मात्र हो तपाईं को "को थिएटर" विषयवस्तु काम गर्न अनुमति दिन्छ, तर पनि धेरै प्रभावकारी।
को अन्तरक्रियात्मक पाठ को पाठ्यक्रम मा, यो विधि तपाईं चाँडै विद्यार्थीहरूको रचनात्मक गतिविधि अधिकतम प्रयोग संग वर्ग अगाडि समस्या समाधान गर्न अनुमति दिन्छ। शिक्षक अगाडि सबैभन्दा शानदार हुन सक्छ केही जो विकल्प, एक ठूलो संख्या राख्नका लागि समाधान छलफल सहभागीहरू निम्तो दिनुहुन्छ। कि पछि, सबै भन्दा सफल चयन सबै विचार र प्रश्नको जवाफ अनुमति दिन्छ जो।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, पारस्परिक सिक्ने तरिका को एक किसिम छन्। र ती प्रत्येक आवेदन छात्र संचार सीप विकास गर्न मात्र होइन, तर पनि विकास गर्न, व्यक्तिगत को समाजीकरण गर्न सक्रिय गति दिन मौका दिनुहुन्छ टिमवर्क कौशल, साथै सम्भव शिक्षक र बच्चाहरु को बीच खडा कि मनोवैज्ञानिक तनाव हटाउन।
Cheaply उच्च शिक्षा को एक उपाधि किन्न
प्राविधिक प्रक्रियाहरू र उत्पादन (विशेषता) को स्वचालन: कहाँ काम गर्न
एक अस्थायी बिन्दु नम्बर के हो?
धरती मा जीवन को विकास को प्रारम्भिक चरणमा
को विद्वान हुनुहुन्छ? रुचि ती लागि जानकारी
एकाकीपनको के हो र कस्तो भूमिका यसलाई मानव जीवनमा खेल्छ?
खाद्य-फ्याट बर्नरहरू पतला प्रभावकारी हुन्छन्
"Riker" - उच्च गुणवत्ता र वास्तविक सान्त्वना को जूता
टालो सजावट 'आफ्नो हातमा' कुकुर ''
को भित्री उच्च plinth
टिभी प्रस्तोता र showman Aleksandr Pryanikov: जीवनी, पेसा र परिवार
सुकरात को जीवनी - एक विचारक दृश्य को embodiment
आर सी ट्यांक - बच्चाहरु र वयस्क लागि एक रोचक खेलौना
Lika Rulla - एक अभिनेत्री गाउँछन् गर्ने